पुरुष मोटरसाइकल–चालकको हेपाइले कहिलेकाहीँ स्कुटरवाली हैरान – Rastriyapatrika
पुरुष मोटरसाइकल–चालकको हेपाइले कहिलेकाहीँ स्कुटरवाली हैरान
प्रतिमा कार्की, मोडल । पुरुषले पनि स्कुटर हाँक्छन् तर आमरूपमा यसलाई महिलाको सवारीसाधन मानिन्छ । मोटरसाइकलको तुलनामा महिला स्कुटर चलाउन सहज ठान्छन् । पुरुष मोटरसाइकल–चालकको हेपाइले कहिलेकाहीँ स्कुटरवाली हैरान हुन्छन् ।
स्कुटरवालीहरूको भनाइ छ, ‘अलि स्मार्ट भएर त हिँड्नै हुँदैन । जिब्रो पड्काउने, जिस्क्याउने गर्छन् । ट्रक, ट्रिपर र ठूला गाडीले पनि हर्न बजाएर हैरान पार्छन् ।’ विनीता मरहट्टाले शैलीका लागि केही स्कुटरवालीका तीता–मीठा अनुभव समेटेकी छिन् ।
केही दिनअघि मात्र स्कुटरमा काठमाडौंदेखि बनेपा जाँदै थिएँ । स्कुटरमा दिदी र म दुईजना थियौं, त्यसैले गति कम थियो । १५ मिनेटपछि एउटा मोटरसाइकलले पछ्याइरहेको चाल पाएँ ।
मोटरसाइकलमा दुईजना पुरुष थिए । कहिले विस्तारै चलाउँथे, कहिले बेस्सरी बत्ताएर अगाडि गएर पर्खिन्थे । हामी दुवै जनालाई एकदम दिक्क लागिसकेको थियो । एकछिन त उनीहरूले जिस्क्याइरहेको थाहा नपाएझैं गर्‍र्यौं ।
स्कुटर चलाउन मभन्दा दिदी बढी अनुभवी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले स्कुटर चलाउँछु भन्नुभयो । तीव्र गतिमा कुदाएर ती पुरुषको मोटरसाइकलसम्म पुर्‍याउनुभयो र बेस्सरी गाली गर्नुभयो ।
आफ्नो बाटो हिँड्दा पनि महिलालाई किन यस्तो गरिन्छ ? अलि स्मार्ट भएर त हिँड्नै हुँदैन । जिब्रो पड्काउने, जिस्क्याउने गर्छन् । ट्रक, ट्रिपर र ठूला गाडीले हर्न बजाएर हैरान पार्छन् ।
स्कुटर चलाएर हामीले कुनै नौलो काम गरेका होइनौं । जसरी पुरुषले आफ्नो सवारीसाधन चलाउँछन्, त्यसरी नै हामीले पनि आफ्नो सवारीसाधन चलाएका हौं । यसमा अनौठो मान्नुपर्ने वा जिस्क्याउनु पर्ने के नै छ र ? महिलालाई मात्र किन यस्तो व्यवहार गरिएको होला जस्तो लाग्छ ।
यो खबर अन्नपूर्ण पोस्ट बाट लिएको हो ।